Ku saabsan - StrengthenME
XoojintaME waa jawaabta caafimaad ee dabeecadda Maine iyo u adkaysiga falcelinta COVID-19 Faafida. Waxaan nahay wadashaqeyn ururada bulshada iyo wakaaladaha iswaafajinta ee bixiya maaraynta cadaadiska bilaashka ah, fayoobaanta iyo ilaha adkeysiga ee qofkasta oo la kulma falcelin walaac leh ee Faafida.
HALKAAN AYAAN KU Caawinaynaa
Wac caawimaadda gobolka oo dhan
207-221-8198 ama 866-367-4588
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan sida aan u caawin karno, noo soo dir .
Helitaanka “Caadi ah” sanadka 2020
COVID-19 ayaa wax beddelay. Shaqadu way ka duwan tahay. Iskuulku waa ka duwan yahay. Gurigu waa ka duwan yahay. Noloshu way ka duwan tahay taasna way adkaan kartaa.
StrengthME waxay bixisaa aalado lagula qabsado hubin la’aanta nolosha faafa. Culeyska welwelka leh ee COVID-19, iyo dhibaatada uu ku hayo shakhsiyaadka, qoysaska iyo bulshada, waa dhab. StrengthME waxay bixisaa aaladaha maareynta culeyska, ilaha taageerada shucuurta, iyo barnaamijka iyo isku xirnaanta bulshada ee dhiirrigeliya fayoqabka, adkeysiga, awoodsiinta iyo soo kabashada. Ma u baahan tahay qof inuu kala hadlo walaaca la xiriira COVID? Wac. Marabtaa inaad wax ka ogaato ilaha laga heli karo bulshadaada? Wac. Ma danaynaysaa ladnaanta saaxiib ama qof aad jeceshahay? Wac.
StrengthME waa lacag la’aan, qarsoodi ah, qarsoodi ah, oo ay heli karaan qofkasta oo jooga Maine.